Imbali kunye neNkcubeko IColonialism kunye ne-Imperialism
Ngomhla kaNovemba 16, 1532, uAtahualpa, Nkosi ye-Inca Empire, wavuma ukudibana neentlobo zezinye izizwe zangaphandle ezazizithengele umbuso wakhe. Laba bantu bezinye iintlanga babengamadoda angama-160 aseSpain abancinci ngaphantsi komyalelo kaFrancisco Pizarro kwaye bahlaselwa ngokukhohlisa baze bathabatha umlawuli waseInca. U-Atahualpa wanikela ukuzisa abathumbi bakhe inzuzo yentlawulelo kwaye wenza njalo: ubuninzi bezinto ezixabisekileyo bezingqonge.
I-Spanish, ixhala malunga neengxelo ze-Inca zikhulu kule ndawo, zenzeke i-Atahualpa nanini ngo-1533.
Atahualpa kunye nePizarro
UFrancoco Pizarro kunye neqela lakhe laseSpain bebehlolisise ulwandle olungasentshona eMzantsi Melika iminyaka emibini: bebalandela iingxelo zobukhosi obunamandla, obutyebi obuphezulu kwiintaba ze-Andes. Bafudukela kwilizwe baze bahamba baya edolobheni laseCamamarca ngoNovemba ka-1532. Babenenhlanhla: Atahualpa , uMlawuli we-Inca wayekho. Wayeyithintele umntakwabo uHuasscar kwimfazwe yombutho ngenxa yokuba ngubani oya kulawula ubukumkani. Xa iqela labangamazwe angama-160 lalibonakalisa emnyango wakhe, u-Atahualpa wayengesabi: wayezungezwe ngumkhosi wamashumi amawaka amadoda, ininzi yabo imfazwe yemfazwe, eyayinyanisekileyo kuye.
Abaqhubi baseSpeyin baqaphela umkhosi omkhulu ka-Atahualpa - njengokuba beyazi ubuninzi begolide kunye nesilivere ezithwala i-Atahualpa kunye ne-Inca.
EMexico, uHernán Cortes wayefumene ubutyebi ngokubamba uMlawuli waseAztec uMontezuma: uPizarro wagqiba ekubeni azame icebo elifanayo. Wafihla abamahashe bakhe kunye neenqwelo zokulwa ezijikeleza isikwere eCammararca. UPizarro wathumela uYise uVicent de Valverde ukuba ahlangabezane ne-Inca: i-friar ibonise i-Inca ibhaso. I-Inca yajonga ngaphaya kwayo kwaye, ingagqithwanga, yiphosa phantsi.
I-Spanish isebenzisa le nto efuna ukuhlambuluka njengesizathu sokuhlaselwa. Ngokukhawuleza isikwere sazaliswa ngamaSpaniards ahlomile ngeenyawo kunye nehashe, ukuxhatshaza amaqhawe asekuhlaleni kunye namaqhawe ukuduma kweenqanawa zomlilo.
U-Atahualpa wabanjwa kwaye amawaka amadoda akhe abulawa. Phakathi kwabafileyo kwakungabantu abahlali, amajoni kunye namalungu abalulekileyo e-Inca yobuKristu. I-Spanish, ngokuqinisekileyo ingenakuvakalayo kwiinqwelo zayo ezinzima zensimbi, ayizange ihlelwe yintlungu. Abagadi bamabhiza babonakala bephumelela ngokukhethekileyo, behla phantsi kwabantu abanoyikiyo njengoko bebaleka. U-Atahualpa wabekwa phantsi kwelindili elindayo endlwini yeLanga, apho ekugqibeleni wadibana noPizarro. UMlawuli wayevunyelwe ukuthetha nabanye bakhe, kodwa onke amagama aguqulelwe iSpanishi ngumtoliki wesizwe.
Akuzange kuthathe ixesha elide u-Atahualpa ukuba uqaphele ukuba iSpeyin yayikho igolide nesiliva: iSpanish ayichange ichithe izidumbu kunye namatempile eKamjamarca. U-Atahualpa wenziwe ukuba aqonde ukuba uya kukhululeka ukuba wahlawula ngokwaneleyo. Wanikela ukuzalisa igumbi nge golide kwaye kabini phezu kwesilivere. Igumbi lalingama-22 ubude ubude ngeenyawo ezili-17 ububanzi (6.7 emitha ngamanqanaba ama-5.17) kwaye uMlawuli wanikela ukuwuzalisa ukuphakama kwama-8: 45m.
Abantu baseSpain bayamangalisa kwaye bayamkela ngokukhawuleza eso sipho, baze bafundise unobhala wencwadi ukuba benze igosa. I-Atahualpa yathumela ilizwi ukuzisa igolide kunye nesiliva eCammararca kwaye kungekudala, abalindi bezindlu babemisela i-fortune edolophini ukusuka kuzo zonke iindawo zombuso kwaye bebeka ezinyaweni zabahlaseli.
Okwangoku, i-Inca Empire yaphonswa ingxubusho ngokubanjwa koMlawuli. Ku-Inca, uMlawuli wayengumntu oyingcwele-noThixo kwaye akukho mntu wanikezela ingozi yokuhlaselwa. U-Atahualpa wayesandul 'ukutshathisa umntakwabo, uHuasscar , kwimfazwe yombutho phezu kwesihlalo sobukhosi . U-Huascar wayephila kodwa wabanjwa: U-Atahualpa wayeyesaba ukuba uya kubaleka kwaye avuke ngenxa yokuba uAtahualpa wayebanjwa, ngoko wayala ukufa kukaHuscar. I-Atahualpa yayinemikhosi emithathu emininzi kwintsimi phantsi kweenkosi zakhe eziphezulu: iQuisquis, iCalcuchima kunye neRumiñahui.
Laba bameli baqaphela ukuba iAtahualpa ibanjwe kwaye yagqiba isigqibo malunga nokuhlaselwa. UCalcuchima wagqitywa kwaye wabanjwa nguHernando Pizarro , kanti abanye abalawuli ababini beza kulwa neSpeyin kwiinyanga ezilandelayo.
Ngasekuqaleni kwe-1533, amahemuhemu aqala ukujikeleza ngekampu yaseSpain malunga neRumiñahui, omkhulu kunabo bonke abaphathi be-Inca. Akukho namnye waseSpain wayesazi kakuhle apho uRumiñahui wayenoyika kakhulu umkhosi omkhulu. Ngokutsho kwamahemuhemu, uRumiñahui uye wanquma ukukhulula i-Inca kwaye wayefudukela ekuhlaseleni. UPizarro wathumela abagibeli ngaphesheya. La madoda awafumananga uphawu lomkhosi omkhulu, kodwa ke amahemuhemu aqhubeka. Ixhala, iSpeyin yagqiba ukuba iAtahualpa ibe yimbopheleleko. Bazama ngokukhawuleza ngenxa yokunyanzela - ngenxa yokusoloko etshela uRumiñahui ukuba avukele - kwaye wamfumana enetyala. I-Atahualpa, uMdluli we-Inca wokugqibela wamahhala, wabulawa ngo-Julayi 26, 1533.
U-Atahualpa wayegcine isithembiso sakhe waza wagcwalisa igumbi ngegolide nesiliva. Ubuncwane obulethwe eCamamarca bebuhlungu. Imisebenzi engabonakaliyo yobugcisa ngegolide, isilivere kunye ne-ceramic zaziswa, kunye neetoni zentsimbi exabisekileyo kwizinto zokugcoba nezetempile. AmaSpanish abanobukrakra achitha izinto ezixabisekileyo ukuze igumbi lizalise ngokukhawuleza. Konke oku buncwane kwanyanzeliswa phantsi, kubanjwe kwi-karat ye-22 yegolide kunye nokubalwa. Intlawulelo ye-Atahualpa yongezwa ngaphezu kweeyure ezili-13,000 zegolide kunye neesilivere esiningi. Emva kokuba "uhlanga lwesihlanu" lukhishwe (uKumkani waseSpain wanikela irhafu ye-20% kwintambo yokulwa), olu butyebi lwahlula phakathi kwamadoda angama-160 ngohlobo olunzima olubandakanya abantu abahamba ngeenyawo, abamahashe kunye namagosa.
Eyona nto ibonelele kumajoni athola iipluni ezingama-45 zegolide kunye neekhilogram zesiliva ezingama-90: kwinqanaba lanamhlanje igolide kuphela ixabisa ngaphezu kwesigidi sezigidi zeedola. UFrancoco Pizarro wathola amaxesha alingana nama-14 inani lejoni eliqhelekileyo, kunye ne "zipho" ezininzi njenge-Atahualpa itrone, eyenziwe ngegolide le-karat eyi-15 kwaye yayingama-183.
Igolide Elilahlekileyo laseAtahualpa
Ingqungquthela yokuba abaqhubi baseSpain abazange bafumane izandla zabo zobugovu kuzo zonke ihlawulelo lika-Atahualpa. Abanye abantu bakholelwa, ngokusekelwe kwimiqulu ethile yembali, ukuba iqela labantu belihlala e-Cajamarca kunye nomthwalo wegolide ye-Inca nesilivere kwintlawulelo ka-Atahualpa xa befumana igama lokuba uMlawuli wayebulewe. Umphathi we-Inca ophethe uxanduva lokugqiba ukulufihla kwaye wayishiya emqolombeni ongenakubonakaliswa ezintabeni. Kufunyaniswa ukuba kwafunyanwa emva kweminyaka engama-50 nguSpain ogama linguValverde, kodwa waphinde walahleka kwaze kwaba yilapho umntu onokuthiwa nguBarth Blake wafumanisa ngo-1886: kamva wafa ngokusola. Akukho mntu usibonile oko. Ngaba kukho ixabiso elilahlekileyo le-Inca kwi-Andes, isitifiketi sokugqibela seNtlawulelo ka-Atahualpa?
Hemming, uJohn. Ukunqotshwa kwe-Inca London: i-Pan Books, 2004 (yokuqala ye-1970).
10 Amazwi ngoFrancisco Pizarro
10 Amanqaku Ngomnqopho wolawulo lwe-Inca
Bartolome de Las Casas, Defender of America aseMerika
Ukuthathwa kwe-Inca Atahualpa
I-Biography yeTúpac Amaru
I-Biography yeManco Inca (1516-1544): UMlawuli we-Inca Empire
USpeyin American Colonies kunye neNkqubo ye-Encomienda
Ukuvukela kukaManco Inca (1535-1544)
Imbali yaseLatin yaseMelika: Isingeniso kwi-Era Colonial
Ngowe-1962 i-British Open: ezimbini kwi-Row ye-Arnie
Umnxeba weNgombolo wesiNgesi
Ukusika iintambo kwiiNtsebenziswano ezinobuthi
Norm Thagard: I-Astronaut yase-US eyaba yiCosmonaut
Ukuqwalasela i-Architecture yeNtshukumo
Kutheni Ufanele Ukunciphisa Iivili Zakho Zasebusika
Umlinganiselo weeMfazwe kunye neMigqaliselo kwiPiloponnesian War
Imfazwe Yehlabathi II: USS Saratoga (CV-3)
Indlela Yokubhala Izinto Ezinhlanu EzikuJapan zaseJapan
Ukuzonwabisa uJoe Biden Memes kunye nekiso
I-Amherst Poltergeist eyoyikisayo
Funda ambalwa 'amaHundekommandos' (iiNjalelo zeenja) ngesiJamani
Izibheno eziPhephayo zokuPhepha zePhepha
I-Diwali (Deepavali) Imihla ye-2018 ukuya ku-2022
I-Dracula: I-Stage Play Ebhalwa nguSteven Dietz
Indlela Yokubonisa Ubungakanani NgesiNgesi Kubaqalayo